အဲယားဘတ်စ် A330 Multi Livery Pack FSX/P3D
မေးခွန်း အဲယားဘတ်စ် A330 Multi Livery Pack FSX/P3D
2 လအတွင်း3weeks ago -2လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1599 by petvel
အသစ်ပြောင်းခြင်းပေါ်တွင် addon တွင် Cebu Pacific အဟောင်းနှင့်အသစ်အသည်းအသန်အသစ်များကိုထည့်ရန်သင့်အား ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Cebu Pacific livery ပုံစံသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အင်္ဂလိပ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည် အမှန်ပင်လေယာဉ်ကိုချစ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2လအတွင်း 1 တပတ်အကြာအားဖြင့် petvel.
2 လအတွင်း3weeks ago #1601 by Yegarff
"ငါလိုချင်တယ်"? “ တော်တော်လေး ကျေးဇူးပြု၍” လုပ်မလား။
2 လအတွင်း3weeks ago #1602 by Yegarff
ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်! မင်းအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ထင်တယ် Rikoooo ကမင်းအတွက်လေယာဉ်ကိုသုတ်ပေးမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
1.278 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်